आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समापन « Farakkon
आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समापन
आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा कुल २ सय ८८ पदक जित्दै नेपाल आर्मी च्याम्पियन बन्न सफल भएको छ । उसले कुल १ सय ४० स्वर्ण,८१ रजत र ६७ कास्य पदक गरेर कुल २ सय ८८ पदक जित्न सफल भएको छ । आर्मीले कुल १ हजार १ सय ३९ पदकका लागि भएको प्रतिपस्र्धामा सर्वाधिक २ सय ८८ पदक जित्दै च्याम्पियन बन्न सफल भएको हो ।
बुधवार समापन भएको राष्ट्रिय प्रतियोगिताको प्राप्त नतिजा अनुसार नेपाल पुसिल १ सय ५७ पदक जित्दै द्वितीय बन्न सफल भएको छ । नेपाल पुलिसले ६२ स्वर्ण, ४९ रजत र ४६ कास्यसहित १ सय ५७ पदक जित्न सफल भएको छ । ५३ स्वर्णसहित २ सय ३ पदक जितेपनि एपिएफले तृतीय भएको छ । प्रतियोगिताअन्तर्गत प्रदेश नं. ३ ले २२ स्वर्णसहित १ सय २२ पदक जित्न सफल भएको छ ।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले १२ स्वर्णसहित ७७ पदक, प्रदेश नं. ५ ले ११ स्वर्णसहित ८५ पदक, प्रदेश नं. १ ले ९ स्वर्ण सहित ८८ पदक, सुदुरपश्चिमले ८ स्वर्ण सहित ५४ पदक, प्रदेश नं. २ ले ६ स्वर्णसहित ३३ पदक, गैरआवासीय नेपाली सघंको टोलीले ६ स्वर्ण पदकसहित १३ पदक र कर्णाली प्रदेशले ३ स्वर्ण पदकसहित १३ पदक हात पार्न सफल भएको छ ।
आठौं राष्ट्रिय प्रतियोगितामा ७ प्रदेश, तीन वटा विभागिय टिम र गैरआवासीय नेपाली संघसमेत गरी ११ टिमको सहभागिता थियो । अधिकांस खेलहरु प्रदेश नं. ५ मा भएका हुन् । दाङ, बाँके, रुपन्देही, ललितपुर र पोखरामा प्याराग्लाईडिङ खेलहरु खेलाइएका थिए । टिम गेमहरु जस्तै व्याटमिन्टन, टेवलटेनिस अनौपचारिक रुपमा चैत २७ गतेदेखि दाङ लगाएतका जिल्लाहरुमा सुरु भएका थिए । तर प्रतियोगितको औपचारिक रुपमा उद्घाटन भने बैशाख ५ गते राष्ट्रपतिले बाँकेमा गरेकी हुन् ।
बुधवार बाँके पुगेर नेपालगंज रंगशालामा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले राष्ट्रिय खेलकुदको समापन गरेसँगै आठौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता विधिवत रुपमै सपमान भएको छ । यसैबीच नवौं संस्करणको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गण्डकी प्रदेशमा गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
महिला फुटवलको उपाधि एपिएफलाई
आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत महिला फुटवलको च्याम्पियन सशस्त्र प्रहरी बल एपिएफ भएको छ । बुधवार बेलुका दाङ तुलसीपुरस्थित बेलुझुण्डी रंगशालामा भएको फाइनल भिडन्तमा नेपाल आर्मीलाई ट्राईब्रेकरका आधारमा एपिएफले पछाडि पारेको हो । निर्धारित अवधिमा दुबै टिम गोलरहित बराबरी खेल पछि खेल ट्राईब्रेकरमा गएको थियो ।
सुरुमै आर्मीकी निशा बोहरालले गोल गर्न चुकिन । तर एपिएफको तर्फबाट सावित्रा भण्डारीले पहिलो गोल गरेकी थिइन । एपिएफकी किप्परले एउटा गोल रोक्न सफल भएकी थिइन भने आर्मीको किप्परले पनि एउटा गोल रोक्न सफल भएकी थिइन । आर्मीको तर्फबाट अर्की एक खेलाडीको प्रहार गरेको गोल पनि पोलमा लागेर बाहिरिएको थियो । त्यस्तै एफिएफकी अनिता बस्नेत पनि गोल गर्न चुकिन । ट्राइबेकरमा एपिएफले चार गोल गरेको थियो भने आर्मी तीन गोल गरेको थियो ।
नेपाल पुलिस तृतीय
खेलमा नेपाल पुलिस तृतीय स्थानमा चित्त बुझाउन बाध्य भएको छ । बुधबार बिहान बेलझुण्डी रंगशालामा भएको खेलमा प्रदेश ३ नं. र पुलिस बीच भएको खेलमा निधारित समयमा बराबरी खेलेका थिए । त्यसपछि खेल ट्राईब्रेकरमा गएको थियो । ट्राईब्रेकरमा पनि समान गोल भएपछि शर्ट एण्ड डेथका आधारमा पुलिसले ३ नं. प्रदेशलाई जितेको हो । यो दुई टिमले खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरी खेलेका थिए ।
दोस्रो हाफको २७ औं मिनेटमा प्रदेश ३ को जर्सी नम्बर ७ की मनिषा थापाले गोलको खाता खोलेकी थिइन । तर लगत्तै ३४औं मिनेटमा पुलिसको तर्फबाट जर्सी नम्बर १४ की निरु थापाले जवाफी गोल फकाउँदै खेल बराबरीमा पु¥याउन सफल भएकी थिइन । निर्धारित समयमा समान एक÷एक गोलको बराबरी खेलेपछि जितका लागि ट्राइबेकरमा गएको थियो । तर ट्राइबेकरमा दुबै टिमको समान ४ ÷४ को भएपछि अन्तिम नतिजा शर्ट एण्ड डेथका आधारमा निकालिएको हो ।
आठौंं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको पुरुष फुटबलको उपाधि नेपाल आर्मीले जितेको छ । बुधबार नेपालगंज रंशालामा उपाधिका लागि भएको फाइनल भिडन्तमा नेपाल पुलिस क्लवलाई १–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै आर्मी विजेता बन्न सफल भएको हो । आर्मीका लागि खेलको ४३औं मिनेटमा जर्सी नं. ४ का विकास तामाङले गरेको गोल नै निर्णायक बन्न पुग्यो ।
यसैबीच बुधबार नै भएको त्यसअघिको प्रतियोगितामा प्रदेश नं. ५ लाई ७–१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै सशस्त्र प्रहरीको एपिएफले तृतीय हुन सफल भएको छ ।